သင့်​အသက်​ ဘယ်​​လောက်​လဲ? ဘာ​နေ့​မွေးလဲ?သာမှန်​မှန်​​ပြောပါ . . . - Mega Wave
Unicode နှငျ့ အောကျတှငျဖတျနိုငျသညျ
သင့်​အသက်​ဘယ်​​လောက်​လဲ? ဘာ​နေ့​မွေးလဲ?သာမှန်​မှန်​​ပြောပါ မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဇနကဟောကိန်း
ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနကမင်း၏ ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆရာကြီးများက တီထွင်၍ တွက်ကိန်းဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်း၍ ယနေ့ပညာရှင်များထ်ိ သုံးစွဲနေသော တွက်ကိန်းဖြစ်ပါသည်။
တွက်ကိန်းအား ပုံသေကားချမယူပဲ မဟာဘုတ်စသော အခြားတွက်ကိန်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဟောပြောလျှင် အလွန်အစွမ်းထက်သော ဟောကိန်းဖြစ်သည်။
မိမိက တနင်္လာသားသမီး အခုရောက်သက် ၂၀နှစ်ဆိုရင် တနလာင်္ဇယားကွက်ထဲတွင် ၂၀ ကိုရှာပါ။ * ပျက်* အကွက်ထဲတွင်ရှိသောကြောင့် ထိုအဟောကိုဖတ်ပါ။
တည်​ဆိုတာ သ​င်္ဘောတည်​​ဆောက်​တာကို ​ပြောတာပါ။ လုပ်​ငန်း​တွေအတွက်​ ကြံစည်​ဆဲ၊ လုပ်​ငန်း​တွေအစပြုဆဲ အ​ခြေအ​နေကို​ရောက်​​နေတယ်​လို့ ​ပြောတာပါ။ လုပ်​ငန်းအတွက်​ ရင်းနှီးမြုပ်​နှံဖို့ ရန်​ရှာရာတွင်​လွယ်​ကူလိမ့်​မည်​။
လုပ်​ငန်းအကြံအစည်​​အောင်​မြင်​မည်​။ အလုပ်​ရှာ​နေလျှင်​ အလုပ်​ရမည်​။ အလုပ်​​လျှောက်​ထားလျှင်​ အလုပ်​ရမည်​။ အမှုကိစ္စ​တွေ၊ အလုပ်​​တွေများမည်​။ ​ငွေဝင်​များသလို ​ငွေထွက်​လဲများမည်​။
ထွက်​ဆိုတာ ဇမ္ဗနဂိုရ်​ပြည်​က သ​င်္ဘောစထွက်​တာကို​ပြောတာပါ။ ​ကောင်းမွန်​​သောမိတ်​​ဆွေသစ်​များ တိုးမည်​။ စပ်​တူရှယ်​ယာလုပ်​ငန်းများ လုပ်​ရမည့်​အချိန်​​ကောင်းပါ။ ပြည်​တွင်း၊ပြည်​ပခရီးများ သွားရမည်​။ နိုင်​ငံခြားကုန်​လုပ်​ငန်းများ ​အောင်​မြင်​မည်​။
ပျက်​ဆိုတာ သ​င်္ဘောပျက်​သွားတာကို ​ပြောတာပါ။ ကံဇာတာညံ့ချိန်​ပါ။ စီးပွား​ရေးကျဆင်းမယ်​။ သူများမ​ကောင်းကြံတာခံရတတ်​သည်​။ မ​တော်​တဆထိခိုက်​မှု အ​သေးအဖွဲများ ကြုံတတ်​သလို ​သေ​ကောင်​​ပေါင်းလဲ​ဝေဒနာများ ဖြစ်​တတ်​သည်​။ ရာထူးလုပ်​ငန်းကို​နှောင့်​ယှက်​မည့်​သူ ​ပေါ်လာလိမ့်​မည်​။ အိမ်​​ထောင်​​ရေးကို အထူးသတိထားပါ။
ကျောက်​ဆိုတာ ​မေခလာနတ်​သမီးက ​ကျောက်​ဖျာထက်​မှာတင်​​ပေးထားတဲ့ ကိန်းဆိုက်​ပြီဆို​တော့ ကံ​ကောင်းပြီလို့မှတ်​ပါ။ မ​မျှော်​လင့်​ပဲကူညီမယ့်​သူ​တွေ​ပေါ်မယ်​။ ​အောင်​ပါ​လေသိန်းထီဆုကြီးများ ​ပေါက်​မယ်​။ မကျန်းမမာဖြစ်​​နေရင်​​တော့ ပြန်​ပြီးကျန်းမာလာမယ်​။
ဆရာ​ကောင်းနဲ့​တွေ့ပြီလို့​ဟောပါ။ အမှုရှိရင်​ရှိနိုင်​မည်​။ အချုပ်​​နှောင်​ခံ​နေရရင်​ လွတ်​မည်​။ ကျဆင်း​နေ​သောစီးပွား​ရေးများ ပြန်​တက်​လာမည်​။ ပညာ​ရေးလဲ​ကောင်းမည်​။ အိမ်​​ထောင်​ကျလျှင်​ အိမ်​​ထောင်​ဖက်​​ကောင်းနှင့်​​တွေ့ပြီလို့​ဟောပါ။ အကြံအစည်​များ ​အောင်​မြင်​မည်​။
ထီးဆိုတာ ထီးဖြူ​ဆောင်းတဲ့ကိန်းပါ။ နာမည်​​ကျော်​ကြားထင်​ရှားမည်​။ ​ကောင်းသတင်းနှင့်​ ​ကျော်​ကြားခြင်းပါ။ ဆုလာဘ်​​တွေရမည်​။ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်​ထူးများ ရမည်​။ စာ​မေးပွဲ​ဖြေထားရင်​ စာ​မေးပွဲ​အောင်​မည်​။ ရာထူးတိုးမည်​။ စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းများ တိုးချဲ့ရမည်​။ အိမ်​သစ်​​ဆောက်​ကိန်း၊ အိမ်​သစ်​ရကိန်း​ပေါ်မည်​။
နန်းဆိုတာ နန်းအပ်​ခံရတဲ့ကိန်းပါ။ ကံဇာတာ​ကောင်းပြီလို့​ဟောပါ။ ရာထူးတိုးမည်​။ စီးပွားဖြစ်​ထွန်းမည်​။ အ​မွေအနှစ်​​တွေရမည်​။ အပြိုင်​အဆိုင်​​တွေမှာ အနိုင်​ရမည်​။ ​ရွေး​ကောက်​ပွဲ​တွေမှာ ဝင်​​ရောက်​ယှဉ်​ပြိုင်​ရင်​နိုင်​မည်​။ အိမ်​​ထောင်​ကျကိန်းရှိသည်​။ အိမ်​​ထောင်​ကျလျှင်​လဲ ကံ​ကောင်းမည်​။ အလှူပြုလုပ်​ရမည်​။ မင်းစိုးရာဇာ အကြီးအကဲဖြစ်​မည်​။
စံဆိုတာ မင်းစည်းစိမ်​ကိုခံယူရတဲ့ကိန်းပါ။ ​ဘေးအန္တာရာယ်​ကင်းပြီး စုတ်​ကြီး၊လာဘ်​ကြီး​တွေဝင်​မည်​။ လုပ်​ငန်း​တွေတိုးတက်​မည်​။ ကြီးမားတဲ့ရာထူး​တွေရမည်​။ သို​လှောင်​ပစ္စည်း​တွေက အကျိုးအမြတ်​ရမည်​။ အ​ခြွေအရံမိတ်​​ဆွေအ​ပေါင်းအသင်း တိုးမည်​။ ​ငွေ​ကြေးစု​ဆောင်းမိမည်​။ ယခုအဟောတမျိုးထဲနှင့် ပုံသေယူ၍မရပါ။ မသိသေးသူများ သိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကူးယူရေးသားပါသည်။ Credit to written by ဗေဒင် လက္ခဏာ
သငျ့အသကျဘယျလောကျလဲ? ဘာနမှေ့ေးလဲ?သာမှနျမှနျပွောပါ မှနျလှနျးလို့ ထပျခါ ထပျခါ ဖတျဖွဈတဲ့ ဇနကဟောကိနျး
ဘုရားအလောငျးတျော မဟာဇနကမငျး၏ ဖွဈစဉျခုနှဈမြိုး အခွပွေု၍ ရှေးဆရာကွီးမြားက တီထှငျ၍ တှကျကိနျးဆငျထားခွငျးဖွဈသညျ။ အလှနျလှယျကူရှငျးလငျး၍ ယနပေ့ညာရှငျမြားထိ သုံးစှဲနသေော တှကျကိနျးဖွဈပါသညျ။
တှကျကိနျးအား ပုံသကေားခမြယူပဲ မဟာဘုတျစသော အခွားတှကျကိနျးမြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးဟောပွောလြှငျ အလှနျအစှမျးထကျသော ဟောကိနျးဖွဈသညျ။
မိမိက တနင်ျလာသားသမီး အခုရောကျသကျ ၂၀နှဈဆိုရငျ တနလာင်္ဇယားကှကျထဲတှငျ ၂၀ ကိုရှာပါ။ * ပကျြ* အကှကျထဲတှငျရှိသောကွောငျ့ ထိုအဟောကိုဖတျပါ။
ပကျြဆိုတာ သင်ျဘောပကျြသှားတာကို ပွောတာပါ။ ကံဇာတာညံ့ခြိနျပါ။ စီးပှားရေးကဆြငျးမယျ။ သူမြားမကောငျးကွံတာခံရတတျသညျ။မတျောတဆထိခိုကျမှု အသေးအဖှဲမြား ကွုံတတျသလို သကေောငျပေါငျးလဲဝဒေနာမြား ဖွဈတတျသညျ။ ရာထူးလုပျငနျးကိုနှောငျ့ယှကျမညျ့သူ ပျေါလာလိမျ့မညျ။ အိမျထောငျရေးကို အထူးသတိထားပါ။
နနျးဆိုတာ နနျးအပျခံရတဲ့ကိနျးပါ။ ကံဇာတာကောငျးပွီလို့ဟောပါ။ ရာထူးတိုးမညျ။ စီးပှားဖွဈထှနျးမညျ။ အမှအေနှဈတှရေမညျ။ အပွိုငျအဆိုငျတှမှော အနိုငျရမညျ။
ရှေးကောကျပှဲတှမှော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျရငျနိုငျမညျ။ အိမျထောငျကကြိနျးရှိသညျ။ အိမျထောငျကလြှငျလဲ ကံကောငျးမညျ။ အလှူပွုလုပျရမညျ။ မငျးစိုးရာဇာ အကွီးအကဲဖွဈမညျ။
စံဆိုတာ မငျးစညျးစိမျကိုခံယူရတဲ့ကိနျးပါ။ ဘေးအန်တာရာယျကငျးပွီး စုတျကွီး၊လာဘျကွီးတှဝေငျမညျ။ လုပျငနျးတှတေိုးတကျမညျ။ ကွီးမားတဲ့ရာထူးတှရေမညျ။ သိုလှောငျပစ်စညျးတှကေ အကြိုးအမွတျရမညျ။ အခွှအေရံမိတျဆှအေပေါငျးအသငျး တိုးမညျ။ ငှကွေေးစုဆောငျးမိမညျ။ ယခုအဟောတမြိုးထဲနှငျ့ ပုံသယေူ၍မရပါ။ မသိသေးသူမြား သိစရေနျ ရညျရှယျ၍ ကူးယူရေးသားပါသညျ။ Credit to written by ဗဒေငျ လက်ခဏာ
← တစ်ချို့အပျိုတွေဟာ အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့ အကြောင်းရင်း ၅ ချက်
ထူးဆန်းတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးလေး →
သင်မွေးဖွားတဲ့ရာသီဥတုက ပြောနေတဲ့ သင့်အကြောင်းများ